Ezekieri 12 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Zvinhu zvinofananidzira kutapwa (1-20)
Mukwende wekutapwa nawo (1-7)
Jinda richaenda kwasviba (8-16)
Kudya vachishushikana, kunwa mvura vachitya (17-20)
Chirevo chenhema chinofumurwa (21-28)
“Hapana shoko rangu richanonoka kuitika” (28)
12 Shoko raJehovha rakauyazve kwandiri, richiti: 2 “Mwanakomana wemunhu, uri kugara nevanhu vanopanduka. Vane maziso ekuona asi havaoni, nenzeve dzekunzwa asi havanzwi,+ nekuti ivo imba inopanduka.+ 3 Zvino iwe mwanakomana wemunhu, zvirongedzere mukwende wekutapwa nawo. Ubve waenda kuutapwa ari masikati ivo vakatarisa. Ibva pamba pako uende kuutapwa kune imwe nzvimbo, ivo vakatarisa. Zvimwe vachaona, kunyange zvazvo vari imba inopanduka. 4 Budisa mukwende wako wakarongedzerwa kuenda kuutapwa; ubudise masikati ivo vakatarisa, uye kana ava manheru, unofanira kuenda semunhu ari kuendeswa kuutapwa, ivo vakatarisa.+ 5 “Boora madziro ivo vakatarisa, ubudise zvinhu zvako naipapo.+ 6 Unofanira kutakura zvinhu zvako papfudzi rako ivo vakatarisa, wozvibudisa kwasviba. Ufukidze chiso chako kuti urege kuona pasi, nekuti ndiri kukuita chiratidzo kuimba yaIsraeri.”+ 7 Ndakaita zvese zvandakarayirwa. Masikati ndakabudisa mukwende wangu, semukwende wekutapwa nawo, uye ava manheru ndakaboora madziro nemaoko angu. Uye pakwakanga kwasviba ndakabudisa zvinhu zvangu ndakazvitakura papfudzi, ivo vakatarisa. 8 Mangwanani, shoko raJehovha rakauyazve kwandiri, richiti: 9 “Mwanakomana wemunhu, imba yaIsraeri, iyo imba yekupanduka, haina kukubvunza here kuti, ‘Uri kuitei?’ 10 Vaudze kuti, ‘Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: “Shoko iri rine chekuita nejinda+ riri muJerusarema neimba yese yaIsraeri iri muguta.”’ 11 “Iti, ‘Ndiri chiratidzo kwamuri.+ Zvandaita ndizvo zvavachaitirwa. Vachaendeswa kuutapwa kune imwe nyika.+ 12 Jinda riri pakati pavo richatakura zvinhu zvaro papfudzi, roenda kwasviba. Richaboora madziro robudisa zvinhu zvaro naipapo.+ Richafukidza chiso charo kuti rirege kuona pasi.’ 13 Ndichatambanudza mambure angu pamusoro paro, uye richabatwa nemambure angu ekuvhimisa.+ Ndichabva ndariendesa kuBhabhironi, kunyika yevaKadheya, asi harizoioni; uye iro richafira ikoko.+ 14 Vaya vese vakaripoteredza, vaya vanoribatsira uye mauto aro, ndichavaparadzira kwese kwese;+ uye ndichavhomora bakatwa kuti rivadzingirire.+ 15 Uye vachaziva kuti ndini Jehovha pandichavaparadzira kune mamwe marudzi, uye pandichaita kuti vapararire nenyika. 16 Asi ndichaita kuti pave nevashoma vavo vanopona pabakatwa, nenzara, nedenda, kuti vazoudza marudzi avachaenda kwaari zvinhu zvavo zvese zvinosemesa; uye vachaziva kuti ndini Jehovha.” 17 Shoko raJehovha rakauyazve kwandiri, richiti: 18 “Mwanakomana wemunhu, idya zvekudya zvako uchibvunda, unwe mvura yako usina kugadzikana uye uchishushikana.+ 19 Uti kuvanhu vemunyika yacho, ‘Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha kuvagari vemuJerusarema vari munyika yeIsraeri: “Vachadya zvekudya zvavo vachishushikana, uye vachanwa mvura yavo vachitya chaizvo, nekuti nyika yavo ichasara isina kana chinhu+ nemhaka yemhirizhonga inoitwa nevaya vese vanogara mairi.+ 20 Maguta anogarwa achaparadzwa uye nyika ichava dongo;+ uye muchaziva kuti ndini Jehovha.”’”+ 21 Shoko raJehovha rakauyazve kwandiri, richiti: 22 “Mwanakomana wemunhu, muri kurevei nechirevo ichi chamuri kutaura muIsraeri, chinoti, ‘Mazuva ari kupindana, uye zviratidzo zvese hazvizadziswi’?+ 23 Saka iti kwavari, ‘Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: “Ndichaita kuti chirevo ichi chigume, uye havazochishandisizve sechirevo muIsraeri.”’ Asi vaudze kuti, ‘Mazuva aswedera pedyo,+ uye zviratidzo zvese zvichaitika.’ 24 Nekuti muimba yaIsraeri hamuzovizve nechiratidzo chenhema kana kufembera kwekungofadzana nenhema.+ 25 ‘“Nekuti ini Jehovha ndichataura. Chero shoko randichataura richaitika pasina kunonoka zvakare.+ Mumazuva enyu,+ haiwa imi imba inopanduka, ndichataura shoko ndoriita,” ndizvo zvinotaurwa naChangamire Ishe Jehovha.’” 26 Shoko raJehovha rakauyazve kwandiri, richiti: 27 “Mwanakomana wemunhu, vanhu veIsraeri vari kuti, ‘Chiratidzo chaanoona chichaitika kwapera nguva refu, uye ari kuprofita nezvenguva iri kure.’+ 28 Saka iti kwavari, ‘Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: “‘Hapana shoko rangu richanonoka kuitika; zvese zvandinotaura zvichaitika,’ ndizvo zvinotaurwa naChangamire Ishe Jehovha.”’”